Fikendrena ny tontolon-kevitra: ny valiny amin'ny tontolo doka azo antoka? | Martech Zone
Ny fitomboan'ny ahiahy momba ny tsiambaratelo anio, miaraka amin'ny fahafatesan'ny cookie, dia midika fa ny mpivarotra izao dia mila manolotra fampielezana manokana, amin'ny fotoana tena izy ary amin'ny ambaratonga. Ny tena zava-dehibe dia mila maneho fangorahana izy ireo ary maneho ny fandefasan-kafatra any amin'ny tontolo azo antoka. Eo no ilana ny herin'ny lasibatra amin'ny sehatra.
Ny fikendrena ny tontolon-kevitra dia fomba iray hikendrena ireo mpihaino mifandraika amin'ny fampiasana teny lakile sy lohahevitra nalaina avy amin'ny atiny manodidina ny lisitra dokam-barotra, izay tsy mila cookie na mpamaritra hafa. Ireto ny sasany amin'ireo tombony lehibe azo avy amin'ny kendrena amin'ny zava-misy, ary ny antony ilana azy ho an'ny mpivarotra nomerika na mpanao dokambarotra.
Ny tanjona kendrena manaraka izao dia manome lahatsoratra ivelan'ny lahatsoratra
Ny motera mikendry ny zava-bita mahomby dia afaka mandrindra ny karazana atiny rehetra misy amin'ny pejy iray, mba hanomezana torolàlana 360-tena marina momba ny dikantenin'ny pejy.
Ny fandrindrana ny tontolon-kevitra mandroso dia mamakafaka lahatsoratra, feo, horonan-tsary ary sary hamoronana fizarana fitadiavana kontekôlika izay mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanao dokam-barotra manokana, mba hisehoan'ny dokam-barotra amin'ny tontolo mifandraika sy mifanaraka amin'izany. Ka, ohatra, lahatsoratra iray momba ny Open Australia izay mety mampiseho an'i Serena Williams manao kiraro tenisy Nike mpiara-miasa aminy, ary avy eo ny dokam-barotra ho an'ny kiraro fanatanjahan-tena dia mety hiseho ao anatin'ny tontolo misy ifandraisany. Amin'ity tranga ity dia mifandraika amin'ny vokatra ny tontolo iainana.
Ny fitaovana sasany mikendry ny zava-kendrena mandroso dia misy fahafaha-manavaka horonantsary, ahafahan'izy ireo mamakafaka ny atiny tsirairay amin'ny atiny horonantsary, mamantatra ireo logo na vokatra, mamantatra sary azo antoka momba ny marika, miaraka amin'ny sora-tanana fampandrenesana milaza izany rehetra izany, mba hanomezana tontolo tsara indrindra ho an'ny marketing ao anatiny sy ny manodidina. ny atiny video. Anisan'izany ny zava-dehibe, ny sary rehetra ao anatin'ny horonan-tsary, fa tsy ny lohateny, thumbnail, ary tag fotsiny. Ity karazana fandalinana ity ihany dia ampiharina amin'ny atiny sy sary an-tsary, mba hiantohana ny fiarovana ny tranokala amin'ny ankapobeny.
Ny fitaovana taloha kokoa dia mety tsy mamaka lohatenin-dahatsary na feo fotsiny, fa tsy handinika lalina ny sary, izany hoe mety hiafara amin'ny tontolo tsy mendrika ny doka. Ohatra, ny lohatenin'ny horonantsary dia mety tsy mampidi-doza ary heverina ho 'azo antoka' amin'ny alàlan'ny fitaovana iray lehibe kokoa, toy ny 'Ahoana ny fomba fanaovana labiera tsara' na izany aza ny atin'ny horonantsary mihitsy dia mety tsy mendrika loatra, toy ny horonan-tsary ataon'ny tanora tsy ampy taona manao labiera - ny dokam-barotra amin'ny marika amin'izao tontolo izao izao dia zavatra tsy zakan'ny mpivarotra amin'izao fotoana izao.
Ny vahaolana sasantsasany dia nanangana tsenambarotra mifototra amin'ny indostria voalohany izay ahafahan'ny mpiaramiasa teknolojia voafantina miditra ao amin'ny algorithman'izy ireo ho toy ny teti-dratsy fanampiny, ary manolotra fiarovana amin'ny marika amin'ny atiny fanavakavahana, tsy mendrika na misy poizina - azo ampiharina mba hiantohana ny fiarovana sy ny fahamendrehan'ny marika. tantanana tsara.
Ny tanjona kendrena manaraka izao dia mampiroborobo ny tontolo iainana azo antoka
Ireo fitaovana ireo dia ahafahana manatona fomba be pitsiny kokoa noho ny mifanentana amin'ny teny fanalahidy tsotra, ary mamela ny mpivarotra hanolotra tontolo iainana tian'izy ireo hampidirina, ary ny tena zava-dehibe, ireo izay tian'izy ireo esorina, toy ny atiny mampiasa kabary fankahalana, fizarazarana hyper, politika politika, fanavakavaham-bolon-koditra, fanapoizinana, fanapoizinana, stereotyping, sns. Ohatra, ny vahaolana toy ny 4D dia mamela ny fanilihana mandeha ho azy an'ireo karazana fambara ireo amin'ny alàlan'ny fanatambarana manokana amin'ireo mpiara-miasa manokana toa an'i Factmata, ary ireo famantarana hafa momba ny toe-javatra hafa azo ampiana hanatsara ny fiarovana ny toerana isehoan'ny doka.
Mahomby kokoa noho ny fampiasana cookies an'ny antoko fahatelo ny tanjona kendrena
Ny fikendrena ny fifandanjana dia hita fa mahomby kokoa noho ny mikendry ny fampiasana cookies an'ny antoko fahatelo. Raha ny marina, ny fandinihana sasany dia manome soso-kevitra fa ny fampidinana ny zava-misy dia afaka mampitombo ny fikasana hividy hatramin'ny 63%, mifanohitra amin'ny tanjon'ny mpihaino na ny fantsona.
Ny fandalinana mitovy hita 73% ny mpanjifa mahatsapa ny doka mifandraika amin'ny zava-misy mifameno amin'ny atiny ankapobeny na ny zavatra niainan'ny video. Fanampin'izay, ny mpanjifa kendrena amin'ny sehatra toe-javatra dia 83% kokoa ny manome ny vokatra amin'ny dokam-barotra fa tsy ireo kendrena amin'ny sehatra mpihaino na fantsona.
Ny fankasitrahana ny marika ankapobeny dia 40% ambony ho an'ny mpanjifa kendrena eo amin'ny sehatry ny tontolon-kevitra, ary ny mpanjifa nanolotra doka ara-nofo raha nilaza fa handoa bebe kokoa amin'ny marika iray izy ireo. Ary farany, ny doka misy ifandraisany indrindra amin'ny zava-misy dia nahatonga ny 43% hifandray tamin'ny neural bebe kokoa.
Fandefasana fandaharana amin'ny famitana tanjona
Ny ahiahy indrindra ho an'ireo manelingelina ny fahaverezan'ny cookie dia ny dikan'izany amin'ny programmatic. Na izany aza, ny kendrena ifotony dia manamora ny fandaharam-pianarana, izay mihoatra ny fahombiazan'ny cookie. Vaovao tsara ho an'ny mpivarotra izany, raha jerena ny tatitra vao tsy ela akory izay dia nahitana retargeting programme miankina amin'ny cookies nahatratra 89% ny refin'ny dokambarotra, 47% ny fahita matetika, ary 41% ny fiovam-po ambany.
Na izany aza, ny kendrena ifotony dia tena miasa tsara kokoa amin'ny programmatic satria afaka aroso amin'ny fotoana tena izy, amin'ny ambaratonga, amin'ny tontolo misy ifandraisany (sy azo antoka) kokoa, noho ny fandaharam-pianarana atosiky ny bisikileta cookie fahatelo. Raha ny tena izy, vao haingana no notaterina fa mifanaraka kokoa amin'ny programa ny fandaharam-potoana noho ny karazana fikendrena hafa.
Ny sehatra vaovao dia manome ihany koa ny fahafaha-mitrandraka angon-drakitra voalohany avy amin'ny DMP, CDP, mpizara doka, ary loharano hafa, izay novokarina tamin'ny alàlan'ny motera faharanitan-tsaina, dia manintona hevi-baovao azo ampiharina amin'ny doka fandaharana.
Midika izany rehetra izany fa fitambaran'ny fitarihana ny tontolon-kevitra sy ny angona avy amin'ny antoko voalohany dia manome ny marika ny fotoana ahafahan'ny marika mamorona fifandraisana akaiky kokoa amin'ny mpanjifany amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny atiny izay tena mahasarika azy ireo.
Ny tanjona kendrena eo amin'ny sehatry ny fifandanjana dia hamaha sosona vaovao momba ny saina ho an'ireo mpivarotra
Ny taranaka manaraka fitaovan'ny manan-tsaina mifototra amin'ny zava-misy dia afaka manokatra fotoana matanjaka ho an'ny mpivarotra mba hanararaotra tsara ny fironana amin'ny mpanjifa ary hanamafy ny fandrindrana sy ny fikarohana amin'ny haino aman-jery, amin'ny alàlan'ny fanomezana izany fijerena lalina izany momba ny atiny mirindra sy mifanaraka amin'izany.
Ny tanjona kendrena amin'ny sehatra dia tsy mampisondrotra ny fikasana hividy fotsiny, fa mampihena ihany koa ny fandaniam-bola, mahatonga ny vidin'ny post-cookie isaky ny fiovam-po ho ambany kokoa - zava-bita tena lehibe eo amin'ny toe-karena ankehitriny.
Ary manomboka mahita fitaovana fitarihana mifototra bebe kokoa amin'ny fampiasana ny angona avy amin'ny antoko voalohany izahay avy amin'ny DMP, CDP, na Ad Server izay tohana, azontsika atao izao ny manomboka mahita ny fomba hanovana azy io ho faharanitan-tsaina ho an'ny toe-javatra omnichannel azo ampiharina, hamonjy mpivarotra sahirana ary ny mpanao dokam-barotra dia manana fotoana sy ezaka be dia be amin'ny famoronana sy fanaparitahana ny toe-javatra tonga lafatra indray mandeha. Izany dia miantoka ny fandefasana hafatra tsara indrindra amin'ny tontolo azo antoka amin'ny marika amin'ny fahitalavitra fampisehoana, horonan-tsary, zanatany, feo ary TV azo adika.
Ny dokam-barotra amin'ny alàlan'ny fampiasana AI dia mahatonga ny marika iray hifandray bebe kokoa, mifandraika kokoa ary manome lanja bebe kokoa ho an'ny mpanjifa, raha ampitahaina amin'ny doka kendrena amin'ny ambaratonga fitondran-tena amin'ny fampiasana cookies an'ny antoko fahatelo. Ny tena zava-dehibe dia manampy ireo marika, masoivoho, mpanonta ary sehatra doka hanodina zorony vaovao amin'ny vanim-potoanan'ny cookie izy io, hiantohana ny doka hampifanarahana amin'ny atiny manokana sy ny toe-javatra manokana amin'ny fantsona rehetra, mora sy haingana.
Fantaro bebe kokoa momba ny fikendrena ny zava-misy eto:
Ampidino ny Whitepaper-tsika amin'ny tanjona kendrena
Tags: mpizara dokatv adiresydoka azo antokacdpteny manodidinacontextual dokam-barotramarketing ara-nofotanjona ara-nofofizarazarana hyperpolitika avo lentafanazavana disofitongilanana politikamikasika ny fiainana manokanafandaharan'asafanavakavahanacookies an'ny antoko fahatelohabetsahan'ny poizina